घुम्न जाउ एकै दिन सात पटक घाम उदाउने र अस्ताउने गाउँ - A complete Nepali news portal based on news & views
११ आश्विन २०७७, आईतवार ११:३३ October 1, 2020 Nonstop Khabar
हो उच्च हिमशृङ्लाहरु हिमसेनाका रुपमा चारैतिर चौबिसै घण्टा, बाह्रै महिना नियमित, निरन्तर र अविरल पहरा गरेका छन् । तिनीहरूले सत् असत्को लेखाजोखा गरेका छन् । कालो सेतोको होरो कोरो छन् । राम्रो नराम्रोको डोरो बाँधेका छन् । उचनिचको विभेद छोडेका छन् । घामपानीको लुकामारी खेलेका छन् । तर तर यो असन्तोषी मान्ठलाई त सकेको सबै कुरोको दोहोन गरेर वितृष्णा, घृणा, विकृति, विकार र विषाक्त भाव, संकेत, कम्पन र उफवाहहरू मात्र दिन जानेको छ ।
हो नेप्काले पनि यहाँका मान्ठबाट त्यही पाएको छ तापनि शुद्ध हावा, स्वच्छ पानी, अमृत फल, सुगन्धित फूल र प्रकृति प्रदत्त अन्नबालीहरू दिएको छ । यो यसको बायोडाटा हो । यो यसको सीभी हो । यो यसको परिचय हो । हिमालको कापमा रहेको सानो उच्चसमस्थली नै नेप्का गाउँको भू–अस्तित्व हो । यहाँ जाने नौला मान्छेलाई कुनै अलौकीक, अनमोल, अमुक, अदम्य साहस बोकेको सुन्दर प्राकृतिक गुफामा गएको अनुभव हुन्छ ।
यसैले अरस्तुले प्रकृति नै कलाको अनुकरण हो भने झैँ लाग्छ यो एक कलाका वादहरूको पनि महावादको मूर्त अमूर्त जालोको संसार हो कि आस्तिकले हेरे आस्तिक जस्तै छ । नास्तिकले हेरे नास्तिक जस्तै छ । लामाले हेर त्रिपीटक जस्तो छ । हिन्दुले हेरे गीता जस्तो छ । मुस्लिमले हेरे कुरान जस्तो छ । इसाईले हेरे बाइवल जस्तो छ । तर के हो र, के होइन र ? नेप्का ! यसैले नेप्का नेप्का नै हो । यो अरु हुन सक्दैन ? लाग्छ यहाँ समाधि लिएर बसुँ कि कलम लिएर लेखुँ । सरस्वतिको बन्दना गरु कि लक्ष्मीको उपासना गरुँ ? दमाहाको समर दुन्दुभी बजाऊँ कि ढोलको रन्को कजाऊँ ? तालमिजुराको ताल मिलाऊँ कि काल मिजुराको काल फिजाऊँ ? यो नेप्का हो मात्रै नेप्का हो ।
हुम्लामा करीब दुई दशक अघिसम्म पनि दोलाजी प्रथा कायम रहेको पाइन्छ । यसैको एक ज्वलन्त उहाहरण हो नेप्का गाउँ । यहाँका तामाङहरूले आफुलाई चन ठकुरीको सन्तान हौ भनेर गर्भ गर्छन् ।
यो गाउँका असोजदेखि चैत्र महिनासम्म प्रति दिन एक बिहानै गाउँ वरपर घेरिएर बसेका विभिन्न हिमालहरुलको काखमा लुकामारी गरेर सात पटकसम्म घाम उदाउने र अस्ताउने कर्म देख्दा आफैलाई अचम्म लागेर आउँछ । यसैले पनि मीत्रहरु यो गाउँको अनुपम अनुभव सँगाल्न एक पटक अवश्य पुगौं ।
हुम्लामा ५० करोडको सिमी उत्पादन, बिक्री भने ४० प्रतिशत मात्र